jeudi, 04 août 2016 12:35
Nanao fanambarana ny RMTF
Latsaka an-katerena ny firenena hoy ny mpikambana eo anivon'ny RMTF na Rodoben'ny Malagasy Tia Tanindrazana ho amin'ny fanorenana ifotony ka namory ny mpanao gazety tetsy amin'ny nalugaro 67ha izy ireo io maraina io. Hisy ny fivondronana hampitony ity Tanindrazana ity, ka ny tanjona amin'izany dia ny fanorenana ifotony ny rafi-pitondrana izay misy amin'izao, raha ny fanambaran'izy ireo hatrany.
jeudi, 04 août 2016 12:07
Sary Sobika fampihaingoana
Sambava : Mpiadina bakalôrea teraka saingy tsy azo ny zaza
Tovovavy mpiadina bakalôrea ao amin’ny CEG Sambava no nihetsi-jaza tampoka ny alarobia alina, andro fahatelon’ny fanadinana, satria efa niandry vohoka izy no tonga ny fanadinana bakalôrea. Maty teo am-piterahana ilay zaza, tsy tonga akory teny amin’ny hopitaly. Avotra kosa ilay tovovavy reniny. Ny maraina teo anefa dia nikiry namonjy ny toeram-panadinana ilay tovovavy. Nitondrana ondana tao anaty efitranom-panadinana izy, efitra faha-10 CEG Sambava ; ny fianakaviana kosa miandry aty ivelany.
jeudi, 04 août 2016 11:56
Bemanevika : Mikoropaka ireo tantsaha mpandraharaha lavanila
Tonga any Kaominina Bemanevika ireo voalaza fa iraka avy amin’ny Ministeran’ny Ati-tany, mitaky vola hoe hankalazana ny faha-15 taonan'ny fikambanan’ny mpiasa. Mikoropaka ireo tantsaha mpandraharaha lavanila, ka maro no manidy trano ary milaza fa tsy handoa vola izany, na inona hidona na inona hitranga. Ny lehiben’ny Polisy ao Sambava etsy ankilany, nilaza tamin’ny mpanao gazety androany fa manana « Ordre de mission » mazava ireo olona ireo handeha hanangona vola lavanila aty SAVA, izay zava-baovao indray.
jeudi, 04 août 2016 11:41
Nampisehoan'ireo mpanao gazety tamin'ny fihetsika feno fahendrena ny fitakiana an'ilay code de la communication teny amin'ny Fitsarana Avo Momban'ny Lalam-panorenana omaly tolakandro. Fahazoana hiteny no tena tadiavin'ny mpanao gazety, izay naseho tamin'ny hetsika filaharam-be manoloana ny Fitsarana avo momban'ny lalam-panorenana. Mbola hitohy hatrany moa izany fitakiana izany amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny Miara-manonja.Tantara mitohy.
jeudi, 04 août 2016 11:17
Mikarakara ireo manan-kilema ny Masera ambany fiahian'i Mère Teresa
Ho atsangana olomasina amin’ny 04 Septambra ho avy izao any Rome i Mère Teresa, ka ho fihomanana amin'izany dia manomboka ny Alatsinainy 01 Aogositra ka hatramin’ny 09 Aogositra 2016 ny fihomanam-panahy. Misy arak'izay ny asa fanasoavana an’ireo manan-kilema sy sahirana, ataon'ny fikambanan’ireo Masera eo ambany fiarovany.Miompana indrindra amin'ny fizarana sakafo toy ny buiscuit sy ronono ary vary, eny amin'ny toby eny Ambodin’isotry izany.
jeudi, 04 août 2016 11:13
Morafeno - Sambava : Mamokatra lavanila sy jirofo nefa saro-dàlana
Nasiana fanamboarana ireo faritra tena sarotra tamin’ny làlana mampifandray an’i Sambava amin’ny Kaominina Morafeno izay faritra mamokatra lavanila sy jirofo. 18km eo ny halavirany saingy efa an-taonany maro no potika, atao adin’ny telo amin’ny fiara. Nanomboka ny talata 2 aogositra teo ny asa. Nanazava ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina, Befolera Christian, fa vola madiodio azo tamin’ny fampidiran-ketran’ny Kaominina Morafeno no enti-manana ny fanarenana, ahafahan’ny tantsaha mamoaka ny vokatra.
Fier Mada : Mila fanampiana ireo tantsaha amin'ny famokarana
Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy toy ny tamin'ny taon-dasa ny Fier Mada izay tanterahina hatrany eny amin'ny Kianja annexe Mahamasina, omaly ary haharitra dimy andro. Maro ireo asa tanana sy vokatra vita malagasy aranty sy varotana mandritra io fotoana io. Nanamafy moa ireo tantsaha fa mila fanampiana izy ireo eo amin'ny lafin'ny famokarana.
mercredi, 03 août 2016 13:35
Mahajanga : Mpamily fiara 4x4 mamo nandona moto
Manoloana ny rond point Cathédral no nitranga ny loza.Nodonin'ilay 4x4 nentina mpamily efa mamo ity moto nentina vehivavy iray.Tsy nijanona ny fiara fa dia notaritiny efa ho 15 metatra vao nijanona izy.Naratra mafy ilay vehivavy ka nentina any amin'ny Urgence Androva. Efa tonga kosa izao ny polisy nijery ny zava-misy.
mardi, 02 août 2016 15:26
Parc Ankarafantsika : Lehilahy iray tra-tehaka saika haka sokatra “angonoky”
Tsikaritry ny mpiambina ny faritra arovana ao Ankarafantsika fa misy olona mikasa hiditra teny amin’ny toerana nisy ireo sokatra angonoky, amin’ny andro amin’ny 3 maraina, omaly alatsinainy.Nifanenjehana avy hatrany niaraka tamin’ny Fokonolona mipetraka eo akaikin’ny Valanjavaboarin’Ankarafantsika ka tratra ny lehilahy iray, raha saika nitsoaka. Roa lahy izy ireo saingy tafatsoaka ny faharoa.
mardi, 02 août 2016 13:10
Sary Sobika tahiry fampihaingoana
Mahajanga I : 44,94% ny taham-pahafahana BEPC
Nihena ny vokatra, hoy ny lehiben'ny fari-piadianam-pampianarana Mahajanga I. 1.974 tamin’ireo 4.392 voasoratra anarana no afa-panadinana.